एकाबिहानै मौसम सम्बन्धि फेरी आयो यस्तो अपडेट, काठमाडौंमा आज पानी पर्छ कि पर्दैन ? — Sanchar Kendra
एकाबिहानै मौसम सम्बन्धि फेरी आयो यस्तो अपडेट, काठमाडौंमा आज पानी पर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, नेपालमा पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै छ । यसैको प्रभावले मौसममा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गईहेको जानकारी दिएको छ । अहिले (शनिबार बिहान)देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भईरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लागेको छ ।
काठमडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकंश स्थानमा बिहीबार साँझदेखि वर्षा भएको थियो । गएरातिदेखि वर्षा रोकिएको छ । वर्षा रोकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो हुस्सु लागेको हो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको ३ दिने मौसमको पुर्वानुमान यस्तो छ :
माघ ४ गते शनिबार दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ। पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुनेछ । त्यस्तै राति भने देशको पहाडी भूभागमा आंशिक देखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा आंशिक बदली भई पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का बर्षा हुनेछ ।
माघ ५ गते आइतबार भने बिहानदेखि रातिसम्म देशभर सामान्यतया सफा देखि आंशिक बदली भई पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माघ ६ गते सोमबार पनि बिहानदेखि रातिसम्म देशभर सामान्यतया सफा देखि आंशिक बदली भई पहाडी भूभागका १–२ स्थानमा हल्का वर्षा हुनेछ ।
अहिले काठमाण्डौसहित धेरैजसो ठाउँमा बाक्लो कुहिरो लागेका कारण सडकमा गाडी चलाउन र पैदल हिँड्न पनि समस्या भएको छ । भिजिविलिटी कम भएकाले विस्तारै गाडी चलाउन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण रोकिएको छ । बाक्लो कुहिरो लागेर भिजिविलिटी कम भएपछि आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय दुवै तर्फका उडान र अवतरण हुन नसकेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थलको भिजिविलिटी अहिले ५० मिटर मात्रै छ । उडान तथा अवतरण खुलेपछि पनि त्यसको प्रभाव दिनैभर पर्ने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच लगातारको वर्षा र हिमपातपछि अन्नपूर्ण पदमार्गमा हिमपहिरो गएको छ । पदमार्ग अन्तर्गत देउराली नजिकै हिउँ पहिरोमा केही पर्यटक परेको आशंका गरिएको छ । हिमपहिरोमा केही चिनियाँ र कोरियन पर्यटक परेको अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
हिमपहिरो गएको क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क हुन नसकेका कारण समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ । पदयात्रामा रहेका चिनियाँ र कोरियन पर्यटकको समूह हिमपहिरोमा परेको प्रहरीले बताएको छ। पर्यटकलाई लिएर पदयात्रामा गएका गाइड पनि हिमपहिरोमा परेका छन्।
नेपाली गाइड, पोर्टल, कोरियन र चिनियाँ पर्यटक गरी ९ जना सम्पर्कबाहिर रहेको बताइको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय र टान पोखराबाट उद्दार टोली घटनास्थलतर्फ लागिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दिउँसो १२ बजेतिर देउरालीनजिकै हिमपहिरोको खबर आएको टान पोखरा अध्यक्ष हरि भुजेलले जानकारी दिए । हिमपहिरो गएको क्षेत्रमा हिमपात परिरहेको र जसका कारण सञ्चार सम्पर्क नहुँदा एकिन तथ्यांक नआएको प्रहरी बताउँछ ।
उता जुम्लामा फेरि बिहीबार बिहानदेखि हिमपात भएको छ । यस पटक पनि अघिल्लो हिउँ नपग्लिइ पुनः हिमपात भएको हो । लगातारको हिमपातले जनजीवनले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ । बिहिबारदेखि परेको हिउँले फेरि डाडाँकाँडा सबै सेताम्मे बनाएको छ ।